တစ်ချို. ဒီဇို်င်းနဲ. ဆိုင်းဘုတ်တွေကို မသိခင်မှာတော့ ဖတ်ပုံကတမျိုး သိပြီးသွားရင်တော့၊ အော်ဒီလိုလားလို.ဖြစ်ကြပါတယ်။ အခုပြောပြမယ့် ဆိုင်းဘုတ်ကိုတော့ ပထမမှားဖတ်သူအများစုကတော့ နိုင်ငံခြားသားနဲ.၊ အင်္ဂလိပ်လိုတတ်သောဂျပန်လူမျိုးတစ်ချို.တစ်လေက အများဆုံးမှားလေ့ရှိတယ် လို. လည်းသိရပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးမှားဖတ်တဲ့အခါမှာ“ ဇီးရိုးဝမ်းဇီးရိုးဝမ်း” ဒါမှမဟုတ်ရင် “ဇီးရိုး အိချိ ဇီးရိုးအိချိ” လို. ဖတ်ကြပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်က ဒီမှာပါ။
ယူးရာ့ကုချိုးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ. မာရုအိ ကုန်တိုက်ပါ။ မာရုအိကုန်တိုက်တွေက နေရာတောတော်များများမှာရှိပါတယ်။ သူ.ရဲ. ဆိုင်းဘုတ်လိုဂိုနဲ. ဖတ်နည်းကို မသိတဲ.လူကို ချိန်းမိရင် တော်တော်လေး အထင်လွဲစရာတွေဖြစ်ရပါတယ်။
အဖြစ်ကဒီလိုပါ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဂျပန်လိုကောင်းကောင်းတတ်ပါတယ်။ သူက တိုကျိုကိုလာလည်တဲ.အချိန်မှာ ဂျပန်ဆရာတစ်ယောက်က သူ.ကို ယူရာ့ကုချိုးရပ်ကွက်မှာရှိတဲ. မာရုအိကုန်တိုက်ကို လာခဲ့ဘို.ချိန်းလိုက်ပါတယ်။ ဘူတာကထွက်တာနဲ. အဲဒီဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်ရမယ်ပေါ.။
သူငယ်ချင်းကလည်းဂျပန်လို ကောင်းကောင်းဖတ်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်တော့၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ. တစ်ယော်ထဲထွက်သွားပါတယ်။ နောက်သူငယ်ချင်းကပြန်ပြောတာကတော့ ဒီလိုပါ။
“ကေခိုင်လည်း ဘူတာကထွက်တာနဲ. ဆရာ့ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ရောက်ပြီလို. ဒါပေမယ့် ဆရာပြောတဲ့ မာရုအိကိုတော့ မတွေ.ဘူး”
လို. အဲဒီတော့ ဆရာက “ အခုမင်းရဲ. ဘယ်ဘက်က ဘာ-- အဆောက်အဦ၊ ညာဘက်က ဘာ--”ဆိုပြီးရောက်နေတဲ့နေရာအနီးက မြင်သာထင်သာနေရာတွေကို မေးတော့တာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကေခိုင်ကလည်းပြောတာပေါ့ ၊ “အားလုံးတေ့ာမှန်တယ်ဆရာ၊ မာရုအိ တော့မရှိဘူး”၊ ဒီတော့ဘာကုန်တိုက်တွေ.လည်းတဲ. ကေခိုင်ကပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့၊ “ ဇီးရိုး ၀မ်း ဇီးရိုး ၀မ်း” လို. ။
ဆရာက “ ဇီးရိုး ၀မ်း ဇီးရိုး ၀မ်း”တဲ့ ပြန်ပြောတယ်။
သေချာအောင် ကေခိုင်က နောက်တစ်ခေါက်“ဟုတ်တယ်ဆရာ၊ ဇီးရိုး အိချိ ဇီးရိုး အိချိ” လို.။
ဆရာ “ငါအခု မင်းစောင့်နေတဲ.နေရာကိုသိပြီ၊ အဲဒီမှာ အဲဒီအတိုင်း ခဏစောင့် ဖုန်းပြန်ဆက်မယ်တဲ.”
“သိလား၊မမွန်၊ ခဏကြာတော့ အနားကို ဆရာရောက်လာတယ်၊ ပြီးတော့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးကို လက်ညှိုးထိုးပြီး အဲဒါ မာရုအိ လို.ဖတ်တယ်တဲ့။ ပြီးတော့ မင်းပြောတာလည်း ဟုတ်တာပဲ။ ငါတို. ဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်း ဘာလို. များ ခေါင်းစားစရာဆိုင်းဘုတ်ကို လုပ်ထားပါလိမ့်နော်။ မင်း ကို စိတ်ပူအောင်လုပ်မိတာ တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့”
စာကြွင်း။ ။ ဂျပန်လို အ၀ိုင်းကို “မာရု ”လို.ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်စာလုံး “ い ” “ အိ”　ကို အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ ဖေါ်ပြရင် i သို.မဟုတ် I နဲ. ဖေါ်ပြရေးသားလေ့ရှိပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Monday, October 05, 2009
စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပြန်ပါပြီ အစ်မရေ...။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်... သူ့ဘာသာစကားနဲ့တော့ ဟုတ်နေတာပဲနော်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်းဘုတ်က တကယ်ကို မျက်စိလည်စရာပါ...း)
ခရေညို ဆိုရင်လည်းအဲလိုဖတ်မှာပဲ သိမှမသိတာကိုနော့